प्रकाशन र लेखन लेख, अकाल्पनिक
Delinquency - झन् साधारण यी दिन छ। यो समाजमा स्वीकार सामाजिक मान्यता पनि उल्लङ्घनको implies। delinquent र सबै थप विशाल deviant व्यवहार तिनीहरूलाई ध्यान, sociologists, मनोवैज्ञानिक, डाक्टर, कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरु र पनि साधारण नागरिक बाध्य। धेरै वैज्ञानिकहरूले यस नकारात्मक घटना को प्रकटीकरण निर्धारण गर्ने कारणहरू, कारक र अवस्था अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। तर पहिलो तपाईं सामान्य व्यवहार के छ र के यो कारण छ बुझ्न आवश्यक?
हरेक समाजमा यसको आफ्नै परम्परा र आचरणको नियम छ। तिनीहरूले औपचारिक र अलिखित दुवै हुन सक्छ। आफ्नो प्रवर्तन लागि संयन्त्र छन्। यो मात्र होइन प्रहरी पनि आफन्तहरूको गाली को डर छ बुझे गर्नुपर्छ। एक व्यक्ति यो पारंपरिक नैतिकता लिन गर्दैन, कि तर ठेगाना subconsciously पालना भन्न सक्छ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फरक अवस्था छ कि सुधार को स्थिर प्रक्रियामा छ समाजमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो समयमा, हुनत छन्, पुरानो नियम र नयाँ नष्ट, तर बसोबास र प्रवर्तन तंत्र प्राप्त गर्न समय छैन। त्यसैले, कुनै पनि सुधार र क्रान्तिको delinquency जनसंख्याको बढ्दो स्तर implies। आधुनिक रूस मा स्थिति, रूप, साँच्चै यो बताउँछन्, र संसारमा विनाशकारी प्रवृत्ति। delinquency को अवधारणा सामाजिक र कानुनी मान्यता पनि कुनै पनि उल्लंघन समावेश छ। यो deviance देखि प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। उत्तरार्द्ध, को तिरस्कार implies नातेदार अवधारणा छ। यो एक विशेष सामाजिक समूह मा व्याप्त नियमहरूमा बुझाउँछ। Delinquency - यो एक निरपेक्ष अवधारणा छ। यो देश को व्यवस्था संग गर्न छ। तर delinkvetnoe व्यवहार पूरा एक औपचारिक सजाय हुनुपर्छ जसको लागि मात्र ती कार्यहरू समावेश छ।
अध्ययन को इतिहास
मान्छे को सामान्य व्यवहार - कुनै पनि समाज को सुरिलो कामकाज जग हो। त्यसैले, सबै समय मा शक्ति, दार्शनिकहरू र वैज्ञानिकहरू प्रयोग विधि र माध्यम फेला पार्न प्रयास गरेका छन्। त्यसैले delinquency - समाजशास्त्र अध्ययन को विषय हो। उनको अध्ययन तालिका पनि Durkheim मूल मा। तथापि, delinquency को अध्ययन गर्न समर्पित छुट्टै क्षेत्र, Merton र कोहेन कारण गठन। सोभियत संघ मा एक विशेष distsilin रूपमा लत, अपराध र suicidology को रूपरेखा मा अध्ययन गरिएको छ। Delinquency - यो मात्र 1960-1970-एँ संग रूसी sociologists को विषय छ। यो घटना को अध्ययन गर्न ठूलो योगदान Afanasiev सन्तुलन, Matochkin, Gilinskiy छ।
delinquency को कारण
विभिन्न निर्देशनहरू अलग सामान्य व्यवहार देखि समाजशास्त्र विचलन बताए। Merton, Durkheim निम्न, शब्द "विसंगति" प्रयोग गर्दछ। उसलाई तल, उहाँले नयाँ मूल्य अझै दृढ स्थापित, र पुरानो पहिले नै आफ्नै outlived हुँदा, समाज को राज्य बुझ्नुहुन्छ। यसरी, यो delinquency र किशोरों व्याख्या गर्न सम्भव छ। यो समाज मा psyche को पुनर्गठन र आफ्नो ठाउँमा परिवर्तन र भूमिका संग जोडिएको छ। delinquent व्यवहार को कारण, Merton अनुसार, मानव समाज अघि राखे जो को उद्देश्य बीच समन्वय अभाव छ, र यो उहाँको दिन्छ भन्ने हो। अर्को प्रवृत्ति अन्य सांस्कृतिक मान्यता उपस्थिति को विचलन बताउँछन्। रूसी समाजशास्त्री मानिसहरूको असमानता को, यो व्यक्तिगत सामाजिक समूहहरू आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न असम्भव छ किनभने विचलन उत्पन्न कि विश्वास गर्दछन्। कारण अर्को समूह विभिन्न pathologies संख्या मा वृद्धि गर्न सम्बन्धित छ। उदाहरणका लागि, मानसिक रोग, लागूपदार्थ र रक्सीको दुरुपयोग लागि।
delinquent व्यवहार को मुख्य प्रकार एउटा अपराध हो। साथै, यसलाई वेश्यावृत्ति र लागू पदार्थको लत एक प्रजाति हो। को रूसी वैज्ञानिक हरमन काममा अपराध झूट मा सामाजिक अध्ययन को मूल। तिनीहरूलाई एक महत्वपूर्ण योगदान गर्ने Franco-बेल्जियम Statistician Quetelet गरे। पछिल्लो म कुनै पनि सामाजिक प्रणाली अपराधको अस्तित्व presupposes कि निष्कर्षमा आए। उन्मूलन तिनीहरूलाई पूर्ण असम्भव छ, मात्र नियन्त्रणमा राखिएको गर्न सकिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, रूस मा अपराध को वृद्धि निकै एक बजार अर्थव्यवस्था गर्न संक्रमण प्रभावित भएको थियो।
को सोभियत संघ एक लामो समय लत लागि मात्र पूंजीपति देशहरूमा समस्या छलफल भएको थियो। तर, समकालीन रूस मा कुनै यसको महत्व इन्कार छ। राय पोल लागूऔषध प्रयोग को मुख्य कारण नयाँ अनुभव को लागि एक तिर्खा छ भनेर देखाउँछ। यसलाई साथीहरू र परिचितहरू को प्रभाव अन्तर्गत तिनीहरूलाई आदी छन् जो जवान मान्छे को सबै भन्दा अवस्थामा छ। आजको समाज लागूऔषध प्रयोग को नतिजा बारे धेरै राम्रो जानकार छ, उत्तरदाताओं को सबै भन्दा तिनीहरूलाई नकारात्मक व्यवहार गर्छन्।
delinquent व्यवहार अर्को प्रकार वेश्यावृत्ति छ। यसलाई श्रम सामाजिक विभाजन र एकै जनासित मात्र विवाह विकास उत्पत्ति। पनि मध्य युग मा चर्च यो घटना संग राख्न बाध्य भएको थियो। निषेधाज्ञा (prohibitionism), दर्ता र चिकित्सा निगरानी (विनियमन) र निवारक काम (abolitionism) पूरा: त्यहाँ वेश्यावृत्ति तिर तीन मुख्य नीति हो। पहिलो दुई प्रकारका अप्रभावी हुन सिद्ध गरेका छन्। ऐतिहासिक अनुभव मात्र भरपर्दो सामाजिक र आध्यात्मिक रूपान्तरण समाजमा यो समस्या समाधान गर्न सक्ने देखाउँछ।
Deviance र delinquency
यी दुई अवधारणाहरु सम्पूर्ण बराबर छैनन् भनेर तुरुन्तै स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले पूरै र यसको भागहरु रूपमा प्रत्येक अन्य सम्बन्धित। कुनै पनि delinquent व्यवहार deviant छ, तर हरेक विचलन - एक अपराध हो। सबै कि देशमा लागू कानून मा निर्भर गर्दछ। Deviant व्यवहार मात्र औपचारिक मान्यता को कार्यान्वयन अनुगमन कि यसको विशेष शरीर को व्यक्ति मा राज्य को प्रभाव अन्तर्गत delinquent बन्नेछ।
संक्रमण अवधि सधैं गाह्रो छ। यो यस उमेर को सबै जटिलताओं बताउँछन्। यो समय गठन को प्रकृति मा। युवा delinquency स्कूल truancy, सुरु पैटी hooliganism। शिक्षा यसको मुख्य कारण अक्सर परिवार मा कमीकमजोरी र समस्या छन्। कहिलेकाहीं यो psychopathology र असामान्य प्रकृति, जो आक्रमण provokes, अन्य बच्चाहरु संग भेट्नुपर्छ गर्न अनुमति नगर्ने संग सम्बद्ध गर्न सकिन्छ।
विधायिका - यो के हो?
Kungur गुफा मा पदयात्रा।
कृत्रिम पत्थर बनेको countertops: ग्राहक समीक्षा र सुविधाहरू
उपग्रह, डिजिटल, पारस्परिक संग पेशेवरों र टिभीमा को बुरा
कलिनिन्ग्राद अतिथि घर: समीक्षा
महिलाहरु को लागि वियाग्रा - अब सेक्स देखि एक पूर्ण खुशी महिलाहरुको लागि उपलब्ध छ